မူခင်း | asnthanhan's Blog
၂၀၁၁ ခု သြဂုတ်လ အတွင်းက နေပြည်တော် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုတွင်တွေ့ရသော ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း (ဓာတ်ပုံ – Yonhap News)
ပြည်ပသို့ အိမ်အကူအဖြစ်စေလွှတ်ပါက ထိရောက်စွာအရေးယူမည်!
Posted by asnthanhan under မူခင်း, အထူးသတင်း, အလုပ်အကိုင်
“ဘာမှာလဲ? အလုပ်သမားဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း!
စင်္ကာပူက မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန် S$ 40 ဆောင်တာက အရေးယူနည်း တမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်! “
By Ng Kai Ling-straitstimes
That maid who has just politely greeted you may be from Myanmar.
Maid agencies are now looking northwards to Myanmar, to make up forashortfall in the supply of foreign domestic workers from traditional places like Indonesia and the Philippines.
The wait foranew maid from these traditional sources now takes about six to eight weeks, compared with four to six weeks previously, due to such factors asa‘supply crunch’ and the current Muslim Ramadan fasting season.
LEAVING HOME FOR BETTER PAY IN SINGAPORE
Myanmar domestic helper Mya Mya Khaing’s wish is to buyacar – notahouse or land – after finishing her work stint here.
She thinks it makes more sense, as she can rent it out for use asataxi.
‘My friend does that. She gets money every month,’ said the 34-year-old when The Sunday Times met her yesterday.
Ms Khaing recently started working forasecond family here to better provide for her two schoolgoing children, aged 11 and seven.
She first came here in 2009 and worked foraSouth Korean expatriate family until last December, when the family moved to Japan.
Asked why she chose to work in Singapore, the former seamstress who had earned about $60amonth, said: ‘Singapore salary is very high.’
She now earns $470 monthly working foraSingaporean family.
The divorcee was apprehensive when she first arrived because she was not sure if she could do the job well.
‘I was very tired. I took care of two children,athree-year-old andaone-month-old,’ said the high school graduate.
She said while she had learnt English for five years, she has difficulty using the language here.
During the interview, her employer, Madam Ee Ah Moi, asked foracup of coffee.
Ms Khaing brought her milk instead.
‘A third of the time she cannot understand me and 70 per cent of the time I have to guess what she is saying.
‘But she is very mild-mannered and willing to learn,’ said the 73-year-old retiree who used to ownamaid agency.
Language barrier but she’s willing to learn
‘A third of the time she cannot understand me and 70 per cent of the time I have to guess what she is saying. But she is very mild-mannered and willing to learn.’
MADAM EE AH MOI on Ms Khaing
Ms Mya Mya Khaing, 34, isaMyanmarese maid who is now working in Singapore. Drawing an average monthly pay of $380, Myanmarese maids are cheaper than those from Indonesia and the Philippines. If the current supply crunch continues, Myanmar could be the next major source country for foreign domestic workers. — ST PHOTO: TED CHEN
ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ မှာ ကျင်းပနေ တဲ့ အမေရိက နိုင်ငံ များ အစည်း အဝေး ကို တက်ရောက်ဖို့သွား ရောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ရှေ့ ပြေး လှို့ ဝှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးဟာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး အလုပ် သမ တွေ မတော် လျှော်ကန်မှု ပြုခဲ့ တယ် ဆိုတာ ကြောင့် ချက်ခြင်း လူစား ထိုးလဲ လှယ် ပြီး ၀ါရှင် တန် ကို ပြန်လယ် ပို့ ဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ရာဇ၀တ် မှု တစ်စုံ တစ်ရာ ကို ကျုးလွန် ခဲ့ တာ မဟုတ် ပေမယ့် Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေ အတွက် ချမှတ် ထား တဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း တွေ ကို ဖောက် ဖျက် ခဲ့ တဲ့ အတွက် အခု လို ပြန်လည် ပို့ ဆောင် ခဲ့ ရတာ ဖြစ်တယ် လို့လွှတ်တော် ရဲ့အမိမြေ လုံခြုံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ Peter King က CNN သတင်းဌာန က Don Lemon ကို ပြောပါတယ်။ မြို့ တော် ကာတာဂျီးနား မှာ ရှိ တဲ့ Hotel Caribe (ဟိုတယ် ကာရစ်ဘ်) မှာ တည်းခို နေစဉ် လှို့ ဝှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေဟာ ဟိုတယ် တွင်း ပါတီ တစ်ခု ပြု လုပ် ပြီး လိင် အလုပ်သမား တွေ နဲ့ပျော်ပါး ပြီး နောက် ငွေပေး ချေ မှု မှာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မကျေ နပ်မှု ဖြစ်ပြီး ပြဿနာ တက် ရာ ကနေ ဟိုတယ် လုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေ က နေ ကိုလံဘီယာ ရဲတပ် ဖွဲ့က သိရှိ သွား တာဖြစ်ပါတယ်။ လှို့ ဝှက် လုံခြုံ ရေး အဖွဲ့ဝင် တွေ ထဲ က တစ်ဦး ဒါမှ မဟုတ် ဒီထက် များ မယ့် အရေ အတွက် က ကိုလံဘီယာ ကြေးစား မယ် တွေ နဲ့ပျော်ပါး ခဲ့ တယ် လို့CBS သတင်းမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ သမ္မတ ရဲ့လှို့ ဝှက် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင် ရအမေရိကန် တောင်ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် က ဗိုလ်ချုပ် ဒေါက်ဂလပ်(စ) ဖရေဇာ က ” သူ တို့ကို အမေရိကန် စစ်တပ် အဖွဲ့ဝင် တွေ ရဲ့ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ နဲ့စံနမူနာပြ ၊ ထူးချွန် သူ ပီသစွာ နေ ထိုင် ဖို့လေ့ကျင့် ပေးထား တာ တွေ ကို ချိုးဖောက် လို့စုံစမ်း စစ်ဆေး အရေးယူ သွားမယ်လို့ဆို ပါတယ်။ အကြမ်းဖက် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု အဖွဲ့Counter Terror Assault Team (CAT) ရဲ့ကြီး ကြပ်ရေး မှု တစ်ဦး ဟာလည်း ဒီအဖွဲ့နဲ့ရှိ နေ စဉ် ကမ္ဘာ မှာ အလှ ဆုံး လို့ ပြောကြတဲ့ ကိုလံ ဘီယာ သူ အပျော်မယ် တစ်ဦး နဲ့ပျော်ပါး ခဲ့ တယ် လို့ယူဆတဲ့ အတွက် ထိမ်းသိမ်းထား ရှိ ကာ စုံစမ်း စစ်မေး နေပါတယ်။ ၀ါရှင်တန် ကို ပြန်လည် ပို့ ဆောင်ခဲ့ တဲ့ ၁၁ ဦးထဲ က ငါးဦးဟာ ဒီပြဿနာ မှ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ခဲ့ တယ် လို့စစ်ဖက် သတင်း တွေ ကို ကိုးကား ပြီး Huffington Post မှ ဖော်ပြထား ပါတယ် ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံမှာ အခကြေးငွေ နဲ့လိင် ဖျော်ဖြေ တဲ့ လုပ်ငန်း ဟာ တရား ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမား ကတော့ သောကြာ နေ့က ခြောက် ကြိမ် မြောက် အမေရိကန် စည်းဝေး တွေ့ ဆုံ ပွဲ ကို တက်ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။
ကိုလံဘီယာ သူ တွေ ရဲ့အလှ
လိုအပ် ရင် သမ္မတ အတွက် အသေခံ ပေးတဲ့ Secret Service အဖွဲ့ဝင်များ
by FNG on April 15, 2012
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး အဝတ်မဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ အင်တာနက်ပေါ်တင်မည်ဟု ပြော၍ ငွေသိန်း ၅ဝဝ ခန့် ခြိမ်းခြောက်ရယူမှု ပြည်မြို့တွင် ဖြစ်ပွား
Posted by asnthanhan under မူခင်း
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ ရိုက်ယူကာ ငွေခြိမ်းခြောက်ရယူသည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရဲက ပုဒ်မ ၃၈၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ပြည်မြို့ရှိကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပီကေကျွေးကာ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ဝတ်လစ် စလစ်ပုံ ရိုက် ယူခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းဓာတ်ပုံများကို အင်တာနက်ပေါ်တင်မည်ဟု ခြိမ်း ခြောက် ပြီးငွေအကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံ ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ခန့် ပေးခဲ့ရကြောင်း တရား လိုနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောသည်။ ”အစကတော့ မသိ ဘူးပေါ့၊ နောက်မှ သူက အဒေါ်ကို ဖွင့်ပြော လိုက်တော့ဖြစ်ရပ်အကုန်းလုံးသိကြ ရတယ်၊ဒါနဲ့ရဲစခန်းကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က တိုင်ကြားလိုက် ရတယ်” ဟု ၄င်းက တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောသည်။ ယင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါ်ပြူလာနယူးစ် ဂျာနယ်မှ ပြည်မြို့ ရှိ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းသို့ ဆက် သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒီအမှုဖြစ်တာ ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ သူကိုလည်း ဖမ်းမိထားပါတယ်၊ တရားရုံးကို အမြန်ဆုံးတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေပါ တယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းနေ တရားခံဟု ယူဆရသူ အမျိုးသမီး ငယ်က ခြိမ်းခြောက်၍ ရယူထား သော ငွေစုစုပေါင်း သိန်း ၅ဝ နှင့် ရန်ကုန်ရိုးမဘဏ်မှမထုတ်ရသေး သည့် ငွေကျပ် ၄၆ သိန်းတို့ အပါအဝင် ခြိမ်းခြောက်၍ ရထား သောငွေဖြင့် ပင်ဝယ်ယူထားသည့် လတ်ဝတ်ရတနာ ကျပ်သိန်း ၈ဝ ခန့်တို့ကိုတရား လို ကျောင်းသူ ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်းကို ပြည်မြို့အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဦးဇော်လွင်နှင့် အမှုစစ်ရဲအုပ်ဦးဇော်လှိုင်ထွန်း တို့ထံမှ သိရသည်။”ပြည်မြို့က နွေဦးကံ့ကော် အဆောင်မှာ ဖမ်းမိတယ်။ သူနဲ့အ တူလက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ သိမ်းဆည်းမိ ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အခြားမိန်း ကလေးတွေရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံ တွေကိုပါ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှ ရဲအုပ်ဦးစိုးမင်း ကပြောသည်။ တရားလို ကွန်ပျူတာတက္က သိုလ်ကျောင်းသူသည် ၂ဝ၁ဝ ပြည့် နှစ်သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှစ၍ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်းငွေသိန်း ၅ဝဝ ခန့်ကို တရားခံဟုယူဆရသူ ထံအကြိမ် ကြိမ်ပေးအပ်ခဲ့ရကြောင်း ထိုငွေများကို ပြည်မြို့ရှိ ရိုးမဘဏ်မှ ရန်ကုန်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ရသည့်အပြင် မှတ်ပုံတင်ကိုပါ ပေးထားခဲ့ရကြောင်း အိမ်ရှိမီး ခံသေတ္တာအတွင်းမှ စိန်နှင့် ရွှေများအကုန်လုံးကို SURE ကား ဖြင့်ခိုးထုတ်ယူခဲ့ရန် အကြပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်လာသဖြင့် ဖွင့်ပြောမှ အလုံးစုံသိခဲ့ရပြီး ရဲစခန်းသို့တိုင် ကြားခဲ့ရကြောင်း တရားလိုနှင့်နီးစပ် သူကပြော သည်။ တရားလိုနှင့် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးတို့သည် ၂ဝ၁ဝ မတ်လတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁ဝ ဇူလိုင်လတွင် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးသည် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကာ အိမ်ငှားနေထိုင် ပြီးနောက် အဆိုပါ အိမ်၌တရားလို အားစိတ်ကိုမေ့မြောစေသော ပီကေ ကျွေးကာ အဝတ် များချွတ်၍ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူခဲ့သည်။ထို့နောက် ဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်တင် မည်ဟုခြိမ်းခြောက် ကာငွေညှစ်ခဲ့သည်ဟု တရားလိုနှင့် နီးစပ်သူကပြောသည်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီမှ အဆိုပါအမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ် သက်၍ ”ဒါက မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုပဲ။ ပိုဆိုးတာက ဓာတ်ပုံပြပြီး ငွေခြိမ်းခြောက်တာ ဆိုတော့ တော် တော်အောက်တန်းကျတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘဝလမ်း ဆုံးသွား နိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အ တွက်နောက်လူတွေ ဆက်မ လုပ်နိုင်အောင် ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်သင့်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ဟင်္သာတမြို့ မြသဇင်ဆေးရုံတွင် ၁၂.၁.၂၀၁၂ရက်နေ့က သေဆုံးသွားသော မပြည့်ပြည့်သော်ကိစ္စ (တိုင်ကြားစာ).
Saturday, January 21, 2012 ဒီမိုဝေယံ
Posted in: demowiyan
ကျန်းမာရေး အာမခံထားနိုင်ပါက ဆရာဝန်နှင့် လူနာကြား ပဋိပက္ခလျော့ပါးမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Medical Protection Member နှင့် ကျန်းမာရေး အာမခံထားနိုင်ပါက ဆရာဝန်နှင့် လူနာကြားပဋိပက္ခများလျော့နည်း သွားမည်ဟုကျန်းမာရေး အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဦးစိုးလွင်က ပြောသည်။ ”ကျန်းမာရေး စရိတ်တွေကလည်း ဈေးကြီးကြီးလာတယ်။ အစိုးရက ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ အပိုင်း ရှိသလို၊ ဒီလို ကျန်းမာရေး အာမခံသာ လူနာတွေထားနိုင်လာမယ်၊ ထားခွင့်ရှိလာမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်း တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒါမျိုးရှိ တယ်။ မော်တော်ကားတွေမှာလည်း ထိခိုက်မှု အာမခံထားသလို လူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ လည်းထားနိုင်မယ်ဆို ကောင်းတယ် လို့မြင်တယ်” ဟု အထက်ပါဆရာဝန်က ထပ်မံပြောသည်။ လာမည့် ၂ဝ၁၂ တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော စက်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းများ တိုးလာ ပါကလည်း ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်း ခွင်အတွင်းဖြစ်သည့် ရောဂါများ၊ ထိခိုက်မှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်သော ကြောင့် ယင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံများ ထားရှိရန်လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ထပ်မံပြောသည်။ ”ကျန်းမာရေး အာမခံရှိ ထား ရင်လူနာတွေအတွက် ကောင်းပါ တယ်။ ဆရာဝန်တွေအတွက်ကတော့ Medical Protection Member ထားပေးနိုင်ရင်အဆင်ပြေမယ်။ နိုင်ငံ ခြားမှာ ဒီလိုမျိုးအသင်း၊ အဖွဲ့တွေ ရှိတယ်။ ဆရာဝန်တွေတင် မဟုတ်ဘဲ ဆေးရုံတွေကပါ အဲ့ဒီအသင်းဝင်ထားကြတယ်။ လူနာတွေအတွက် အာမခံကကောင်းတယ် ဆိုတာက တော့ ဆေးရုံတက် ကုသမှုခံယူခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသရခြင်းများကြောင့် စရိတ် စကကြီးပါက အာမခံရှိရင် အာမခံမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်တော့ လူနာတွေ အတွက် စရိတ်စက ကုန်ကျငွေအ တွက် စဉ်းစားစရာ၊ ငွေရှာစရာ မလိုတော့ဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုများအ တွက် အရေးပေါ်ချက်ချင်း ပြုလုပ် နိုင်လို့ ကုသမှုအပိုင်းမှာ အကျိုးရှိပြီး၊ ဆရာဝန် ဘက်ကလည်း လူနာကို ကုသပေးရာမှာ ငွေရေးကြေးရေး သိပ်ငဲ့စရာမလိုတဲ့အတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တယ်။ ချက်ချင်းလုပ်နိုင်တော့ လူနာနဲ့ဆရာဝန်ကြားမှာ ကုသမှု ပိုင်းဆိုင်ရာ မပြေလည်မှုတွေ လျော့ကျနိုင်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ” ဟု ဒေါက်တာဦးစိုးလွင်က ပြောသည်။ ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ်ကို လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရတစ်ခုတည်းက လုပ်ကိုင် သည်မဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိကအနေနှင့် လည်း ပြုလုပ်ခွင့်ပေးမည်ဆိုလျှင် ကျန်းမာရေးလောကအနေဖြင့် အလားအလာ ပိုကောင်းလာမည်ဟု အထက်ပါဆရာဝန်က ၄င်း၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောသည်။